Linux 5.10: Inoratidzira Huru Nhanho Mberi kune RISC-V | Linux Vakapindwa muropa
Iyo kodhi nyowani iri kuunzwa mushanduro dzakasiyana dzeLinux kernel inoratidza zvimwe zvakavanzika zvakavanzika zvehardware. Ikozvino pane yakakosha kufambira mberi muLinux 5.10, uye ndiko kuti inosanganisa yekutanga rutsigiro rweiyo UEFI bhuti maitiro. Izvi zvingaite kunge zvisina musoro, nekuti izvo zvinogoneka neARM kana x86, asi hazvina kunyanya kana tikataura izvo zvakanzi rutsigiro zvinoreva iyo RISC-V yekuvaka apa.
Iyo kodhi yemasisitimu ane RISC-V akavakirwa machipisi ekugona bhuti neEFI Ichave iri paLinux 5.10, yekutanga vhezheni yekupa ino ficha yerudzi urwu rwehardware. Izvo zvichavhura yakawanda mikova yeRISC-V microprocessors, iyo inogona zvakare kushandiswa mune zvishandiso neiyi firmware.
Mamwe ematehwe akabatsira kuita kuti izvi zviitike abva kune mainjiniya eWestern Digital, imwe yenhengo dzeRISC-V Foundation (yava kunzi RISC-V International). Uye kunyangwe ivo vakawedzerwa mushanduro dzakapfuura, zvinoita sekunge mu Linux 5.10 inogona kutoshandiswa pakutanga. Izvi zvinoreva kuti ichabatanidza yekutanga ioremap rutsigiro, PE / COFF musoro, runtime services, nezvimwe.
Mupiro iwoyo weLinux 5.10 unovhura hwindo re mikana mitsva, uye zvinoita sekumwe shanduko yeRISC-V iri kuuya kukernel gore ra2020 risati rapera, uye ichave inonakidza futi. Aya ndiwo mapindiro aanojoinha kirabhu mune iyo IA-32 (x86-32), AMD64 kana EM64T (x86-64), 32-bit ARM uye 64-bit ARM yanga yatovemo. Uchida kana kwete, iyo x86 ecosystem ndiyo yakafararira uye mamwe maratidziro ari kungoenderana nayo kunze kwekudikanwa. Saka hazvishamise kuti ARM yakazviitawo muzuva rayo kana kuti zvakare yakatsigira zvimwe zvikamu zveiyo x86 ecosystem senge ACPI, nezvimwe. RISC-V ichatevera matanho akafanana kana ichida kuve paPC kana HPC masisitimu mune ramangwana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.10: Inoratidzira Huru Nhanho Mberi kune RISC-V
Nhau dzakanaka dzekutanga kupera kwesvondo. Ndiri kutarisira kwavari kutanga kugovera zvikwata zvinoshanda ne risc-v.
SpaceX yatove nemasaiti akakwana ekutanga yayo yeruzhinji beta